मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको सर्वेको काम अघि बढ्यो
शनिवार, फाल्गुन २९, २०७७ जनता नेपाल
काठमाडौं । निक्कै महत्वको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणअन्तर्गत यसअघि स्थानीयको अवरोधका कारण रोकिएको सर्वेको काम अघि बढेको छ ।
रेल मार्ग मानवबस्ती र निजी खेतीयोग्य जमिनमा नपर्ने गरी अघि बढाउने सहमति गरेर सर्वेको काम थालिएको हो । बाराको बकैया खोला किनार ड्यामको पूर्वी किनारलाई समाउँदै रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएपछि स्थानीय पनि सर्वेको काम अघि बढाउन सहमत भएका हुन् । सो मार्गबाट रेलमार्ग अघि बढाउँदा मानवबस्ती, निजी खेतीयोग्य जमिन नपर्ने र तटबन्धको दीर्घकालीन समस्यासमेत समाधान हुने स्थानीयहरू बताउँछन् ।
यसअघि रेलमार्ग बस्ती र खेतीयोग्य जमिनबाट अघि बढाउन खोजेको र कसैलाई जानकारी नै नदिई सर्वे गरेको भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए ।
निजगढ नगरपालिकामा भएको छलफलपछि समस्या समाधान भएको हो । यसअघि, गत ९ फागुनमा रेल विभाग काठमाडौंका महानिर्देशक प्रमिला बज्राचार्य, रेलमार्गका लागि युसिङ कोरियन सर्वे कन्सल्ट्यान्टका मुख्य सर्वेयर मिस्टर कु, मिस्टर सोन, रेल विभागका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर देवेन्द्रप्रसाद साह, नेपाली सर्वे कन्सल्ट्यान्टका जियोलोजिस्ट अच्युत कोइरालासहितको प्राविधिक टोलीले निजगढको बकैया खोलाको पूर्वीतर्फको क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
बकैया खोलाको पूर्वी किनारबाट सर्वे गर्दा कुनै हानिनोक्सानी नहुने भन्दै कुनै समस्या देखिए पारिबाट गर्ने सरकारी र कन्सल्टेन्सी टोलीले बताएपछि रोकिएको सर्वे अघि बढेको हो ।
निजगढ नगरपालिकामा भएको सहमतिअनुसार नै रेलमार्ग लैजाने गरी सर्वे अघि बढाइएको जनाइएको छ । मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गतको रौतहटको चोंचासम्म ठेक्का लगाइसकेको छ । निजगढ–हेटौंडा–भरतपुर लैजानेगरी सर्वे गरिने रेल विभागले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, फाल्गुन २९, २०७७, ०८:००:३४
सिमा स्तम्भहरु मर्मत संहार गर्दै नेपाली सेना
म्यान्मारमा कम्तीमा ३५ जना नेपालीभाषीलाई पक्राउ,दुई जना नेपालीभाषी मारिए
फुटतर्फ एमाले : कठोर कारबाहीको मुडमा ओली
४० बर्ष भारतीय जेलमा बिताएर छुटेका दुर्गाप्रसाद तिम्सिना काँकडभिट्टा आईपुगे, आमालाई भेट्न आतुर
व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीसँग भने–‘व्यवसायीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्यानुहोस्’
शनिवार, चैत्र ७, २०७७ जनता नेपाल
नेपालका उद्योगी व्यवसायीले सरकारको प्रभावकारी नीतिका कारण उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको भन्दै सरकार अझ व्यवसायीमैत्री नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार उद्योगी व्यवसायीसँग प्रधानमन्त्रीले गरेको छलफल कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले सरकारको प्रशंसा गर्दै थप राम्रा नीति तथा कार्यक्रमको अपेक्षा गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
पुन: अनशन बस्ने डा. केसीको चेतावनी (विज्ञप्ती सहित)
शुक्रवार, फाल्गुन २८, २०७७ जनता नेपाल
डा. गोविन्द केसीले अवैध रूपमा अघि बढाइएको निजी मेडिकल कलेजलाई दिने सम्बन्धनको प्रक्रिया तत्काल नरोके अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । बिहीबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै डा. केसीले निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गरेका हुन् । पुरा पढ्नुहोस्